Igcisa lisebenzisa iziyobisi ezingama-20 ezahlukeneyo kwaye lenze imisebenzi engama-20 ukubonisa iziphumo zalo Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ukutyhubela imbali, inani elikhulu labazobi baguqukele kwiziyobisi ukuze bafumane inkuthazo kwaye babonise imisebenzi yabo, ngokubanzi isongelwe ngeethinti zengqondo. Uninzi lwabazobi, ukusuka kwiimvumi ukuya kubabhali ukuya kubenzi beefilimu, babanga ukuba babephantsi kwempembelelo ye-narcotic ngexesha lokuphuhlisa kwabo umsebenzi, uninzi lwabo lwaziwa ngokubanzi kwihlabathi liphela. Ukusuka kwentsangu, esetyenziswa njengendlela yokufumana ukuphumla, ukuya kwiiasidi ezinamandla kunye neziyobisi ezizise kwezinye izinto eziyinyani. Ngumbandela ophikisanayo, kuba umalunga nezinto ezaziwa ngabo bonke, ziyijongela phantsi impilo yomzimba neyengqondo, nangona kunjalo kubazobi abaninzi ithuba lokubona nokuqonda umhlaba ngendlela entsha nengaziwayo ikwazile ukoyisa yonke le micimbi . Enye yezona zinto zisetyenziswa kakhulu kubugcisa behlabathi ibe yile LSD, Ukusukela oko yaphuhliswa malunga ne-1943 ngeenjongo zonyango iye yasetyenziswa njengomthombo wokhuthazo ngenxa yesakhono sayo sokuqhawula abo bayisebenzisayo kwinyani kwaye babenze bangene kuhambo lwengqondo oluhlala luhlala malunga neeyure ezili-12. Ewe sisiyobisi esibonelela ngeziphumo ezingalawulekiyo kwinqanaba lengqondo kwaye nabani na oyisebenzisayo akaze azi ukuba bazakuthatha uhambo lokuya kwilizwe elimnandi nelilihle okanye ngokuchaseneyo nohambo olubi, luzele lunkwantyo kunye nemibono engathandekiyo.
Into engenakuphikwa yeyokuba imisebenzi eyenziweyo phantsi kwefuthe le-LSD ubuncinci kwaye iyacebisa, nangona mna ngokwam ndikuthanda kakhulu ukufumana inkuthazo kwezinye iindlela ezisempilweni, akukho mathandabuzo okuba ukwazi umhlaba wobuchwephesha kunye nePsychedelia phantsi kombono wegcisa umdla. Namhlanje ndingathanda ukwabelana nawe ngomzekelo womyili wezobugcisa uBrian Pollet okanye into azibiza ngayo, IPixel-Pusha. Lo mculi wayefuna ukuvavanya umda kubuchule bakhe bobugcisa kwaye njengelinge wagqiba kwelokuba amele iziphumo zeziyobisi. Umceli mngeni waphakanyiswa ukusebenzisa iziyobisi ezingama-20 ezahlukeneyo, inye suku ngalunye kwiintsuku ezingama-20 zilandelelana. Ngamazwi ombhali, wayefuna "ukudala amathuba okufundisa ahambelana ne-psychedelia kunye nobugcisa."
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Igcisa lisebenzisa iziyobisi ezingama-20 ezahlukeneyo kwaye lenze imisebenzi engama-20 ukubonisa iziphumo zazo